အိမ်တွင်းစီးပွားရေး | စီးပွားရေးဘဏ္ဍာရေး
Encarni Arcoya | 10/01/2022 15:14 | အဆင့်မြှင့်တင် 10/01/2022 15:19 | အထွေထွေစီးပွားရေး
သေချာတာကတော့ မင်းရဲ့လစာကို တစ်ကြိမ်ထက်မက တိုးပေးရမယ်။ အလျဉ်မီနိုင်စေရန် သင့်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် အစားအစာအချို့နှင့်။ ဒါမှမဟုတ် လက်တွေ့မှာ သူတို့သွားချင်တဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲအတွက် လက်မှတ်မတတ်နိုင်တဲ့အခါ နေမကောင်းဖြစ်နေကြောင်း သင့်သူငယ်ချင်းတွေကို သင်ပြောပြဖူးပါတယ်။ ဒီ ၎င်းသည် လူတစ်ဦးချင်းနှင့် မိသားစုအားလုံးတွင် ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းစီးပွားရေးနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ဒါပေမယ့် တကယ်က ဘာလဲ?
အိမ်တွင်းစီးပွားရေး၊ ၎င်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ မည်သည့်အရာများပါဝင်သည် သို့မဟုတ် မည်ကဲ့သို့တိုးတက်ရမည်ကို သင်မသိပါက ဤနေရာတွင် သင်လိုအပ်သော အချက်အလက်အားလုံးကို သေချာပေါက်တွေ့လိမ့်မည်။
1.1 ပြည်တွင်းစီးပွားရေးရဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေက ဘာတွေလဲ။
2 အဘယ်ကြောင့် ဤမျှအရေးကြီးသနည်း။
3 ပြည်တွင်းစီးပွားရေး ဘယ်နယ်ပယ်မှာ လည်ပတ်နေလဲ၊
4 ပြည်တွင်းစီးပွားရေး တိုးတက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
4.1 မှတ်ချက်များကို အမြဲပြုလုပ်ပါ။
4.3 ငွေစုခြင်းပန်းတိုင်များ သတ်မှတ်ပါ။
အိမ်တွင်းစီးပွားရေးကို မိသားစုစီးပွားရေးဟုလည်း ခေါ်ဆိုသည်။ မိသားစုများကဲ့သို့သော လူသိများသော အသေးစားပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်ပွားသော အသုံးစရိတ်များ၊ ဝင်ငွေ၊ စုဆောင်းငွေနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ (အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော)။
တစ်နည်းဆိုရသော် ၎င်းသည် အိမ်နှင့်မိသားစု၏ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်၊ ဘတ်ဂျက်တစ်ခုဖြင့် ၎င်းသည် မတူညီသောအသုံးစရိတ်များ၊ သုံးစွဲမှု၊ ချွေတာမှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို ရင်ဆိုင်ရန် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
လူတိုင်းနားလည်နိုင်သော အိမ်တွင်းစီးပွားရေး ဥပမာတစ်ခုသည် အပတ်စဉ်စျေးဝယ်ခြင်းဖြစ်သည်မှာ သံသယကင်းစရာဖြစ်သည်။ စားနပ်ရိက္ခာဝယ်ရန် ဘဏ္ဍာငွေမှ ခွဲဝေပေးပါသည်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ကျော်သွားရင်တော့ လျော်ကြေးပေးဖို့ တခြားနေရာတွေမှာ ကုန်ကျစရိတ်တွေကို လျှော့ချရမယ်။
El ပြည်တွင်းစီးပွားရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစီ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် ၀င်ငွေကို အခြေခံ၍ အောင်မြင်ရန်မှလွဲ၍ အခြားမရှိ၊ အစားအသောက်၊ အာဟာရ၊ အဝတ်အစားနှင့် ဖိနပ်၊ ကျန်းမာရေး၊ အိမ်ရာစသည်ဖြင့်
၎င်းသည် ငွေရရှိသူအပေါ်သာမက ၎င်းကို စီမံခန့်ခွဲသူ (တူညီသောလူ သို့မဟုတ် အခြားသူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည်) တွင်လည်း အကျုံးဝင်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ သင်ဟာ ကိရိယာတွေကို အသုံးပြုပြီး လူတိုင်းကို စိတ်ကျေနပ်စေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ စီမံခန့်ခွဲရမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီ "ဘတ်ဂျက်" ထဲက မထွက်ဘဲ တစ်ခါတလေ အရမ်းခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းစီးပွားရေးရဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေက ဘာတွေလဲ။
အိမ်တွင်းစီးပွားရေးဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို အခု သင်သိပြီ ဆိုရင် ၎င်းရဲ့ အဓိက လက္ခဏာရပ်တွေကို ရှာဖွေဖို့ဆိုတာ မရှုပ်ထွေးပါဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည်:
အိမ်များနှင့် မိသားစုများကိုသာ အာရုံစိုက်ထားသည်။ မိသားစုမရှိရင် အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ တကယ်တော့ အိမ်သူအိမ်သားဟာ လူတစ်ဦးတည်းလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအပေါ် အခြေခံသည်။ ဝင်ငွေကို မတူညီသော အသုံးစရိတ်များ၊ စုဆောင်းငွေများနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများအဖြစ် ပိုင်းခြားနိုင်စေရန်။
၎င်းသည် လူတစ်ဦး သို့မဟုတ် မိသားစုတွင် မည်သည်အသုံးစရိတ်နှင့် အကြွေးများရှိသည်ကို သိနိုင်စေပါသည်။ စီးပွားရေး တိုးတက်အောင် လျှော့ချဖို့ ကိရိယာတွေ ချထားတယ်။
အိမ်တွင်းစီးပွားရေးသည် အလွန်အရေးကြီးပြီး တကယ်တော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက သင်ကြားသင့်သော အသိပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်မှာ အရာတွေကို အမြဲတောင်းနေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရှိနေတယ်လို့ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် မိဘကောင်းတစ်ဦးဖြစ်လိုသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို သင်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ပြဿနာက သူကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှ ပိုစျေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကို တောင်းတယ်၊ အဲဒီ “ဘာဆန်တယ်” ဆိုတာကို ကျေနပ်အောင် မလုပ်နိုင်တဲ့အခါ ကလေးတွေက သူတို့လိုချင်တာကို အမြဲပေးတဲ့အတွက် အကြောင်းပြချက် နားမလည်ဘူး။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည် ထိုကလေးကို "ငွေပေးချေမှု" ပေးကာ ထိုငွေဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ်ပြီး သူလိုချင်သောအရာကို ဝယ်နိုင်သော်လည်း နောက်အပတ်အထိ ပိုက်ဆံပိုမပေးဘဲ သင်သူ့ကို ကူညီပေးလိမ့်မည်၊ စိတ်အလိုမကျဘဲ လိုအပ်သည့်အရာများတွင် တစ်ယောက်တည်း သုံးစွဲခြင်း၏ အရေးပါမှုကို ရှုမြင်ပါက သင်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စီမံခန့်ခွဲမှုကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အဲဒါ အိမ်စီးပွားရေးရဲ့ အရေးပါမှုပဲ။ သင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်များကာမိစေရန်နှင့် စုဆောင်းထားသော ၀င်ငွေကို စီမံခန့်ခွဲရန် သင်ယူပါ။. ကျန်နေသေးပါက၊ သင့်ကိုယ်သင် ထူးဆန်းသောစိတ်ဆန္ဒကို ပေးစွမ်းနိုင်စေရန် သို့မဟုတ် ၎င်းကို စီးပွားရေးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲရမလဲဆိုတာ မသိဘူးဆိုရင်တော့ ပိုက်ဆံရလာတာနဲ့ အမျှ အကုန်အကျခံပြီး ကုန်ကျစရိတ် မပြည့်မီတဲ့အထိ အကြွေးတင်သွားလိမ့်မယ်။
ပြည်တွင်းစီးပွားရေး ဘယ်နယ်ပယ်မှာ လည်ပတ်နေလဲ၊
မိသားစုစီးပွားရေးအတွင်း၊ ၎င်းသည် ဝင်ငွေ (သင့်တွင်ရှိသောဘတ်ဂျက်) နှင့် အသုံးစရိတ်များကိုသာ တာဝန်ခံရုံသာမက၊ အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် နယ်ပယ်များဖြစ်သည့် ကွဲပြားသောအပိုင်းများကိုပါ တာဝန်ယူထားကြောင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ကုန်ကျစရိတ်. အိမ် သို့မဟုတ် ကားဂိုဒေါင်၊ ခရီးသွား၊ အဝတ်အစား၊ အာမခံစသည်ဖြင့် ပေါင်နှံခြင်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခြင်းမှ လာတတ်သောကြောင့် အလွန်ယေဘုယျအားဖြင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
စားသုံးမှု။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အသုံးစရိတ်တွေဖြစ်တဲ့ လျှပ်စစ်၊ ရေ၊ အစားအသောက်...
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု။ ဥပမာ ပင်စင်ရန်ပုံငွေတွင် လူသည် ၎င်းတို့၏ငွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့်အရာကို အာရုံစိုက်သည့် နယ်ပယ်ဖြစ်သည်။
ချွေတာ. မထင်မှတ်ထားသော အဖြစ်အပျက်များ ပေါ်ပေါက်လာပါက သိမ်းဆည်းထားသည့် ဝင်ငွေ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း။
ပြည်တွင်းစီးပွားရေး တိုးတက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
သင့်မှာ လစာ ယူရို ၁၀၀၀ ရှိတယ်လို့ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ ဝင်ငွေ (ယူရို ၁၀၀၀) နဲ့ အသုံးစရိတ်တွေကို စားပွဲပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါ၊ နောက်ဆုံးမှာ၊ မင်းမှာ ယူရို ၁၅၀၀ ရှိတာကို တွေ့ရတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သင်ရရှိသည်ထက်ပိုမိုသုံးစွဲသည်။
ကယ်တင်ပြီးရင် မူအရ ဘာမှမဖြစ်ဘဲ ကုစားလို့ရတယ်။ သို့သော် ထိုသို့မဟုတ်ပါက၊ ၎င်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်နေပါက သင်သည် အနီရောင်ဖြစ်နေပြီး ဤအလွန်အကျွံအသုံးစရိတ်ကို မရပ်တန့်ပါက၊ သင်သည် သင့်အိမ်၊ ကားဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှုမပြုသည့်အတွက် ပြစ်တင်ခြင်းပင် ခံရနိုင်သည်။
ဒါကြောင့် သိတာ။ ပြည်တွင်းစီးပွားရေးကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင် လုပ်မလဲ ဆိုတာကတော့ ငွေရေးကြေးရေး ပညာရေးကနေတဆင့်ပါ။ ခက်ခက်ခဲခဲ ကြုံရတတ်တာကို သူတို့က မပေးဘူး။
လအစမှာ လုပ်ရမယ်။ သင့်ဝင်ငွေနှင့် သင့်တွင်မည်သည့်အသုံးစရိတ်များရှိသည်ကို သိရန် မှတ်စုရေးပါ။ အချို့က ပြုပြင်ပြီး အချို့က လကုန်သွားပုံပေါ် မူတည်မည်မှာ အမှန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ထိုအကြောင်းကြောင့် သင်သုံးစွဲရမည့်အရာနှင့် သင်သုံးစွဲထားသည်ကို သိရန်လိုသည်။
ဤနည်းဖြင့် သင့်တွင်ရှိသော ဘတ်ဂျက်ကို မှီအောင်ကြိုးစားပါမည်။ ဘာမှမပိုဘူး။
အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ရင်တောင်မှ အရေးကြီးတယ်။ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် မည်သည့်အရာအတွက်မဆို သင့်တွင်ရှိသော ဝင်ငွေ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို သိမ်းဆည်းပါ။ (မတော်တဆ၊ အလုပ်တစ်ခု၊ ကားဝယ်ဖို့…)။
စီးပွားရေး စည်းမျဉ်းအရ လုပ်သင့်တယ်။ သင့်ဝင်ငွေ၏ 20% ကို အမြဲသိမ်းဆည်းထားပါ ပုံသေကုန်ကျစရိတ်အတွက် 50 နှင့် တစ်လအတွက် 30 ချန်ထားပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာမှ ထွက်မလာဘူးဆိုရင်တော့ အဲဒီငွေတွေဟာ စုဆောင်းငွေ အများစုဆီကို ရောက်သွားသင့်တယ်။
ချွေတာရန် အလွန်ခက်ခဲကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် စျေးနှုန်းများတက်လာခြင်းနှင့် ဝင်ငွေအနည်းငယ်တိုးခြင်းမရှိဘဲ အရာရာပိုမိုစျေးကြီးလာခြင်းတို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အတိုင်း၊ စုဆောင်းမှုပန်းတိုင်ငယ်များသတ်မှတ်ခြင်းသည် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို မြှင့်တင်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
ထိုအကြောင်း ဥပမာ ယူရို 1000 ချွေတာရန် ပန်းတိုင်တစ်ခု ပြည့်မီသောအခါ ၎င်းသည် သင့်အား ပိုမိုမြင့်မားသောပန်းတိုင်သို့ ပြန်သွားရန် တွန်းအားပေးပါသည်။. သင့်အကောင့်တွင် အပြုသဘောဆောင်သော လက်ကျန်ငွေကို သင်မြင်ရပြီး ၎င်းသည် ပိုကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းကို ဆက်လက်တိုးလာစေရန်အတွက် သင်အလိုရှိသောအရာဖြစ်သည်။
သင် "တွယ်တာခြင်း" ဖြစ်သင့်ပြီး သင်အောင်မြင်သည့်အလုပ်ကို မနှစ်သက်ဟု မဆိုလိုပါ၊ သို့သော် "ဦးခေါင်း" ရှိပြီး သင့်တွင်ရှိသော မိသားစုအတွက် လုံလောက်သောစုဆောင်းငွေကို ထိန်းသိမ်းပါ။ ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။
နေရာထိုင်ခင်းထိန်းသိမ်းခြင်းသည် မခက်ခဲပါ၊ ပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန် စနစ်တကျစီစဉ်ထားသောနည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန်သာလိုသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » အထွေထွေစီးပွားရေး » အိမ်စီးပွားရေးဆိုတာဘာလဲ